Shirkii Teendhada Afisiyooni iyo rajada laga qabo | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Teendhada Afisiyooni iyo rajada laga qabo
Dhawaan waxaa bur-buray wadahadalladii uga socday teendhada xerada Afisiyooni madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowla goboleedyada xubnaha ka ah dowlada dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa is weydiinaya markan inta ay la egtahay rajada laga qabo in uu dib u furmo wadahadalladii u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo dowla goboleedyada, iyagoo u arka Tanaasulkii uu sheegtay Farmaajo inuu noqon doona mid horseed u ah in wada-hadallada dib ay u furmaan iyadoo ugu dambeyntiina ay mira-dhalaan!
Inkasta oo uu Madaxwayne Farmaajo arrinta doorashada iyo tan amnigaba u xilsaartay Ra'iisul Wasaare Rooble, waxaa siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada ka soo horjeeda Madaxwaynaha ay durbaba bilaabeen in ay jawaabo ka bixiyaan iyagoo ka fiiriniya dhinacyo kala duwan oo dadka intooda badan ka qarsoon.
Waxyaabihii la isku hayay muddadii Teendhada la fadhiyay waxaa kamid ahaa qodobadan hoose:
In Madaxwaynuhu qoro warqad rasmi ah oo uu Amniga iyo doorashada ugu wareejinayo RW Rooble.
In taliyayaasha ciidamada ee ku jira ololaha madaxwwayne Farmaajo la badalo.
In shirka laga qaybgaliyo saamilayda siyaasadda dalka, iyo qodobo kale.
Waxa kaliya ee uu Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ogolaaday waa hal qodob oo kamida kuwa aan kor kusoo sheegnay, intii kalana weli sidii ayey u taagan yihiin, iyadoo ay xusid mudan tahay in shuruudihii hore ay ku soo biireen in siyaasiyiinta mucaaradku dalbadaan in amniga dalka oo dhan laga wareejiyo Madaxwayne Farmaajo, maadaama ciidamadii qalabka siday ee kala aamin baxeen.